Uhlu lwe-imeyili Yabahlengikazi | Database lakamuva Lokuposa
Database lakamuva Lokuposa » Uhlu Lwamakhaya Wabahlengikazi
Ikheli le-imeyili Yabahlengikazi
Uhlu lwe-imeyili Yabahlengikazi Emakhaya lumelela imakethe enkulu embonini yezokunakekelwa kwempilo, Kukhona ukwanda kwesidingo sekhaya lasebekhulile futhi. uhlu lwakho luqinisekiswa ngocingo ngenqubo eyingqayizivele yokuqinisekisa eqinisekisa ukuthi idatha ibhekwa njalo ukuze kwenziwe izinguquko zokuletha idatha esezingeni eliphakeme. Le datha neminye imininingwane yolwazi yezempilo ihlala iqinisekiswa ngocingo emthonjeni. Okwakhelwe kusetshenziswa izindlela ezifakazelwe zokuqinisekisa imininingwane yokuxhumana yabahlinzeki, umkhuba wokufundisa nokuhlinzeka ngabantu, umhlinzeki nezinhlangano zokuzijayeza, Imininingwane yethu iqinisekiswa yizinqubo ezenzakalelayo namehlo abantu. Siyaqiniseka kakhulu ngohlu lwethu lokuxhumana ukuthi sinikezela ngesiqinisekiso sokunemba se-95%
Uhlu lwe-imeyili seluthole ukuthandwa okuningi njengendlela yabasebenzisi be-inthanethi yokuhambisana nezihloko ezizithandayo. Amabhizinisi amaningi manje asebenzisa wona njengethuluzi lokukhangisa nangendlela yokuxhumana namakhasimende. Zisebenza ngempumelelo ngezindlela eziningi ngoba kunzima ukuzigwema. Okwamanje, i-inthanethi yenze ukuthi abantu bakwazi ukuxhumana nezihlobo, abanye abantu, amabhizinisi, njll. Kunoma iyiphi ingxenye yezwe ngokuchofoza nje. Uhlu lwe-imeyili lwenza kube lula kuwe ukuxhumana nabathengi bakho ngokusondele kakhulu.
Thenga Amakhaya abahlengikazi Uhlu lokuxhumana
Uhlu lwethu lokuxhumana lwamakhaya abahlengikazi luzokusiza ukuthi ufinyelele kumakhaya asebekhulile base-USA. Lolu hlu luvuselelwa kamuva nje ohlwini lokuxhumana kwabahlengikazi. Uma ufuna ukwakha i-database yokuxhumana yamakhaya asebekhulile lolu hlu luzokongela isikhathi sakho nemali ngoba lolu hlu lwamakheli lwakhiwe. Ukuthumela Imeyili Kwezempilo kunikezela ngohlu olungcono, lwamazinga aphezulu Wokugcina Amakhaya Wabahlengikazi ukuze ukwazi ukunika amandla umkhankaso wokuthengisa we-imeyili webhizinisi lakho ngolwazi oluqondile, olufanele, noluselekile lokuxhumana.
Finyelela ezikhungweni, kubasebenzi abahlengikazi, nakwabenza izinqumo ngezinhlu eziqinisekisiwe zemininingwane ye-IQVIA, kufaka phakathi ama-imeyili nezinsizakalo ze-imeyili Finyelela imininingwane ejulile emhlabeni wamakhaya asehlengikazi kufaka phakathi uhlobo lwendawo, i-geography, ubunikazi, nokuningi! Amakhaya Wabahlengikazi Onamakhono Nokunakekela Abaphakathi nendawo Uhlu Lwama-imeyili. Uhlu lwe-imeyili Yabahlengikazi emele imakethe enkulu embonini yezokunakekelwa kwempilo, Kukhona ukwanda kwesidingo samakhaya asebekhulile njengoba futhi.Lokhu kunakekelwa kunganikezwa yiqembu le-Senior Life ezindaweni eziningi, kufaka phakathi ikhaya lelungu, ikhaya lamalungu omndeni, indawo yabhlengikazi, noma isibhedlela.
Isebenzisa idatha evela eNursing Home Qhathanisa, uhlelo olwenziwa yiCenters for Medicare and Medicaid Services, olubeka futhi lukugcizelele amazinga ezindlini ezinkulisa.Uhlu Lokulondolozwa Kwezinkulisa liqukethe imininingwane ehlukahlukene kwizikhungo zabahlengikazi ezibamba iqhaza ohlelweni lwe-MO HealthNet. Ukumaketha kumakhaya abahlengikazi kulula kunakuqala ngale database ehlanganisiwe ye-imeyili kusuka ku-Thenga uhlu lwekhaya labadala manje. Sizosiza ukwakha uhlu lwakho lwe-imeyili oluhlosiwe. Cishe sinamarekhodi we-15,000 b2b. Ngakho-ke uma uthenga lolu hlu uzothola i-imeyili eyi-15,000 ye-imeyili futhi negama lebhizinisi le-15,000 nalo ikheli lewebhusayithi nalo linenombolo yefekisi futhi negama lokuxhumana. Phezu kwayo yonke imininingwane yohlu lwe-imeyili. Uma unesikhathi esengeziwe osichitha ekwakheni uhlu lwakho lwama-imeyili okuhlosiwe futhi usebenzise imali ethe xaxa ukuthola i-imeyili enhle yebhizinisi lakho ukuze sikusize uthole uhlu oluphezulu nezinhlu ze-imeyili ezihlosiwe.
Imibuzo Yama-Nursing Homes imeyili & Impendulo